နှမ်းတစ်စေ့ချင်း စုပေါင်းကြရအောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » နှမ်းတစ်စေ့ချင်း စုပေါင်းကြရအောင်
Posted by piti on May 13, 2011 in Community & Society | 17 comments
ရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်နေတာ နှစ်တွေတော်တော်ကြာလာခဲ့ပါပြီ။ ကျနော်တို့ ရွှေပြည်ကြီးကတော့ ရာသီဥတုတွေ ဖောက်ပြန်နေတယ်ဆိုတာကို “နာဂစ်” ရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ရိုက်ခတ်မှုကို ခံရပြီးမှ သတိထားမိလာခဲ့ကြပါတယ်။ နာဂစ်မလာခင် တစ်နှစ်စောပြီး ချောင်းသာကမ်းခြေကို “မာလာ” ဆိုတဲ့ မုန်တိုင်းတစ်ခု ဝင်ခဲ့တုန်းကတည်းက သတိပြုမိရမယ့်ဟာကို ပေါ့ပေါ့ဆဆ နေခဲ့မိကြပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်လည်း နာဂစ်ဆိုတဲ့ မုန်းတိုင်းလည်းတိုက်ခတ်ခံရရော ကျနော်တို့ ရွှေတွေဟာ အငိုက်မိသွားခဲ့ရပြီး လူ့အသက်ပေါင်း မြောက်များစွာ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကျနော်တို့ ရွှေပြည်ကြီးဟာ မုန်တိုင်းတွေ တိုက်လေ့တိုက်စမရှိတဲ့ အလွန်သာယာတဲ့ တိုင်းပြည်တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့တယ်လေ။ ဟော… ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က “ဂီရိ” ဆိုတဲ့ မုန်းတိုင်းတစ်ခုဟာ မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းအထိ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြီး လမ်းစရှာလာခဲ့တယ်။ ဂီရိမုန်တိုင်း လာနေပြီဆိုတော့ ကျနော်တို့ရွှေတွေ အတော်ကြောက်ပြီး သတိနဲ့ စောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြရတယ်။ ရခိုင်မှာ လူ့အသက်အနည်းငယ် ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ နာဂစ်ရဲ့ အတွေ့ အကြုံကြောင့် ပြင်ဆင်သင့်တာတွေ ပြင်ဆင်ခြင်းကြောင့်ရယ် ဒီရေလှိုင်း မဖြစ်ခဲ့တာရယ်ကြောင့် လူ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေ နည်းခဲ့တာပေါ့။
ဟော… အခု ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာရော…..
သင်္ကြန်မတိုင်ခင်က မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသမှာ လေပြင်းတိုက်ခတ်ခံရလို့ ပင်လယ်ထွက် ငါးဖမ်းကြတဲ့ တံငါသည်တော်တော်များများ ဒုက္ခရောက်ခံရပါရောလား။ သေဆုံး၊ ပျောက်ဆုံးသူတွေလည်း တော်တော် များခဲ့တယ်လေ။ ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့ မိုးလေဝသ ဦးစီးဌာနက သတိပေးချက်တွေ ကြိုးစားထုတ်ပြန်ပေးနေပေမယ့် အပြင်မှာ တကယ်တိုက်တဲ့ လေပြင်းမုန်တိုင်းက သူတို့ထုတ်ပြန်တာထက် ပိုပြီး ပြင်းထန်လှလေ့ရှိပါတယ်။ နောက်ထက်မုန်တိုင်းတွေ ကျနော်တို့ရွှေပြည်ကြီးကို အလယ်မလာစေချင်တော့ပါဘူးဗျာ။
နောက်… ရာသီဥတုက အရမ်းပူလာပီနော်။ မနှစ်ကလို အပူချိန် အရမ်းမြင့်မားလာမှာကို တွေးပြီး ကြောက်လှတယ်ဗျာ။ မနှစ်ကဆိုရင် အပူချိန်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအနှံအပြား အထူးသဖြင့် အပူပိုင်းဒေသဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ မန္တလေး၊ မြင်းခြံ၊ မကွေး၊ ချောက် စတဲ့မြို့တွေမှာ သေလိုက်ကြတဲ့လူတွေ သောက်သောက်လဲဆိုပဲဗျ။ မန္တလေးမှာ ဆိုရင် မီးသဂြိုလ်စက်တောင် မနိုင်တော့တဲ့အနေအထား ရောက်သွားရောတဲ့။ အဲဒါတွေကို တွေးပြီး မခံစားချင်ဘူးဗျာ။
ဒီလို ရာသီဥတုတွေ ဖောက်ပြန်နေတာ ဘယ်သူ့အပြစ်ပါလဲ?
ကျနော်တို့ လူသားတွေအရဲ့ အပြစ်တွေပဲပေါ့။ သဘာဝတရားက လူသားတွေရဲ့ အပြစ်ကို ဒါဏ်ခတ်နေတယ်လို့ ဆိုရမှာပေါ့နော်။ စည်းမရှိ ကမ်းမရှိ သစ်ပင်တွေခုတ်လှဲ၊ သယံဇာတတွေ အလွန်အကျွန်ထုတ်ယူ၊ လေထုထဲကို ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေ အများအပြားထုတ်လွှတ်၊ …………. အို အများကြီးပဲ လုပ်ခဲ့ကြတာ။
စည်းကမ်းမရှိတဲ့ ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ ဝိသမာလောဘသားတွေ ဘယ်လောက်များပါစေ ကျနော်တို့ ခင်များတို့ တတ်နိုင်သလောက်လေး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းပေးကြရအောင်လားဗျာ….
စကားပုံတစ်ခု ကြားဖူးတယ်ဗျာ… နှမ်းတစ်စေ့တည်းနဲ့တော့ ဆီမဖြစ်ဘူးတဲ့…. ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ နှစ်တစ်စေ့နဲ့ ခင်ဗျား ဆိုတဲ့ နှမ်းတစ်စေ့ ချင်း စုပေါင်းကြည့်လိုက်ရအောင်လားဗျာ..
အုတ်တစ်ချပ်…. သဲတစ်ပွင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်…..
ချောင်းသာကို ဝင်တာ မာလာဟုတ်ဘူးထင်တယ်နော်။ ဆူနာမီဝင်သွားတာပါ။
အင်ဒိုနီးယားငလျင်ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ဆူနာမီနဲ့ မရှေးမနှောင်း မုန်တိုင်းတစ်ခု ဝင်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ အချိန်တော့ အတိအကျ မမှတ်မိတော့ဘူး။ အဲဒီမုန်တိုင်းက မာလာလို့ အမည်ရှိပါတယ်
မြန်မာပြည်ဟာ..ပြီးခဲ့တဲ့ ၅နှစ်အတွင်း..ကမ္ဘာမှာသဘာဝဘေးအခံရဆုံးနဲ့..လူအသေဆုံးတိုင်းပြည်တခုဖြစ်တယ်လို့.. ကုလသမဂ္ဂစစ်တမ်းကဆိုတယ်..။
နောင်လည်း ကပ်ဘေးကြီးတွေတခုပြီးတခု… လာဦးမှာပဲ..။ ဘာမှမပြင်ဆင်ထားသေးဘူး..။
ဒု ဗ္ဘိက္ခ န္တရကပ်…. ငတ်မွတ်ခြင်းဘေး ဆိုက်ရောက်နေသော ခေတ်ကာလ..
သတ္တန္တရကပ်…. စစ် ၊ လက်နက် ဘေးအန္တရာယ် ဆိုက်ရောက်နေသော ခေတ်ကာလ
ရောဂန္တရကပ်…. အနာရောဂါ ကူးစက်ရောဂါ ဘေးဆိုက်ရောက်နေသော ခေတ်ကာလ..
ကြားထဲ..မုန်တိုင်းနဲ့ ငလျှင်ဘေးက ထပ်ဝင်လိုက်သေးတယ်..။
ဆုနမိ.။မုန်တိုင်း အချိန်မှီသတိပေးစံနစ်တွေတပ်ဆင်ပြီးပြီလား..။ တကယ်လို့..မုန်တိုင်းဝင်လာခဲ့သော်..သဘာဝဘေးကျခဲ့သော်… မိုးလေဒဏ်ခံနိုင်တဲ့.. ခေတ္တနားခိုရာ။။။ အဆောက်အဦးတွေဆောက်ပြီးပြီလား..။
ငလျှင်ဒဏ်ခံနိုင်တဲ့..အဆောက်အဦးတွေဆောက်ဖို့.. အစိုးရက.. ဥပဒေလုပ်ထုံးတွေပြဌာန်းပေးပြီပြီလား..။
ငတ်မွတ်နေတဲ့ ကလေးငယ်တွေကို အဟာရပြည့်ကြွေးနိုင်တဲ့..အစီအစဉ်တွေ.. ကျောင်းတွေကနေ.. အဟာရပြည့်တဲ့အစားအစာတွေ စီမံချက်ချကြွေးတာမျိုး စီစဉ်နေသလား..။
ပြည်တွင်းစစ်အပြီးတိုင်ရပ်စဲနိုင်ပြီလား..။ မြေကြီးထဲမြုတ်ထားတဲ့ မိုင်းတွေကို ပြန်ဖေါ်နိုင်ပြီလား..။
စစ်စရိပ်ကို… တိုင်ပြည်ဂျီဒီပီရဲ့ ၁ဝရာနှုန်းအောက် ချနိုင်ပြီလား..။
မြန်မာတွေအဖြစ်များတဲ့.. အသည်းရောဂါတွေ..။ အေအိုင်ဒီအက်စ်တွေအတွက် ဘာတွေပြင်ဆင်ထားသလည်း.. ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုနည်းအောင်ဘာတွေလုပ်ထားသလည်း…။ ဘာတွေပညာပေးနေသလည်း…။
မြန်မာပြည်မှာ.. ကလေးနဲ့ အသက်ကြီးသူတွေဖယ်ရင်..အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့လူဦးရေ သိပ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးလေ…။
လူဦးရေ သန်း ၅ဝကျော်လောက်က.. တိုင်းပြည်အကျယ်နဲ့တွက်ရင် အင်မတန်နည်းတာပါ..။
ဒီကြားထဲ.. ကုန်ထုတ်စွမ်းအားမရှိတဲ့.. လူတန်းစား၂ရပ်(စစ်သား၊ ဘုရားသား)က..အရွယ်ကောင်းတွေချည်းဖြစ်နေတဲ့အပြင်.. အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့..လူငယ်၊လူရွယ်တွေကိုပါ.. အလုပ်မလုပ်နိုင်အောင် စည်းရုံးသိမ်းသွင်းနေတော့ကာ…
ဆီထွက်နိုင်တဲ့ နှမ်းများလာအောင် အရင်လုပ်ကြရမယ်ထင်ပါတယ်..။
`နှမ်းတွေနဲ့…နှိုင်းပြောရရင်… ဆီမထွက်တဲ့နှမ်းအ,တွေ…များနေတယ်ခေါ်ရမှာပဲ..´ ဆိုတာ ဟုတ်ပါတယ် ….
ခင်များတို့ .. ကျနော်တို့ ကိုယ်တိုင် ဆီသိပ်ထွက်တဲ့ နှမ်းတွေဖြစ်အောင် ကိုယ်တိုင် အရင် ကျိုးစားကြည့်ကြဖို့ ကျနော် တိုက်တွန်းတာပါ… နောက်.. ကျနော်တို့အနီးကပ် သူငယ်ချင်းတွေ… နောက်…. နောက်…..
ဆီမဖြစ်ရင်လဲနေပေါ့။ ဆီဖြစ်ဖြစ် မဖြစ်ဖြစ်
တာဝန် မမဲ့တဲ့ နှမ်းတစေ့အဖြစ်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နှစ်စဉ် ထင်း၊မီးသွေးအတွက် သစ်ပင်ပေါင်းများစွာ ခုတ်လှဲနေရတာကြောင့် အမြဲစိမ်းသစ်တောတွေအပါအဝင် ဒီရေတောတွေပါ ပျက်စီးနေရပါတယ်။ အဲဒါကို ဖြေရှင်းဖို့ဆိုရင် အခုလက်ရှိ ထုတ်လုပ်နေတဲ့ ဂက်စ်တွေကို LPG အဖြစ်ပြောင်းပြီး အိမ်ထောင်စုတိုင်း (တောရော မြို့ပါ) သုံးစွဲနိုင်အောင် လုပ်ကြရပါမယ်။ အဲဒါဆို လျှပ်စစ်မီးကိုလည်း တဘက်တလမ်းက ခြွေတာရာ ရောက်ပါတယ်။ အခုဆို ထမင်းဟင်း ချက်ပြုတ်ဖို့ သုံးစွဲရတဲ့ ပါဝါက တအိမ်လုံး သုံးတာထက် ပိုများနေတဲ့ အိမ်ထောင်စုတွေ များနေပါတယ်။ ပြဿနာတိုင်းအတွက် အဖြေတွေ ရှိပါတယ်။ လက်တွေ့အကောင်အထည် ဖော်ဖို့က ဘယ်သူ တာဝန်ယူ ရမှာလဲ …….. ???????????????????????
zawana ရဲ့ မေးခွန်းက အဖြေမရှိတဲ့ မေးခွန်းလို့တော့ ကျနော်မထင်ပါဘူး….
အဖြေပေးနိုင်မယ့် နှမ်းတစ်စေ့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ ပေါ်ထွက်လာမယ် မျှော်လင့်ပါတယ်…
ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေကိုလည်း ဆိထွက်မယ့် နှမ်းလေးတွေဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားဆဲပါ၊
ပျံ့လွင့်မကုန်အောင် စုနိုင်ဘို့က အရေးပိုကြီးပါသည်။
ဘယ်လောက် အဆီပြည့်တဲ့နှမ်းဖြစ်ဖြစ် ဆုံထဲရောက်အောင် မထည့်နိုင်ဘူးဆိုရင် …
အရင်ဆုံး “စု”နိုင်ဘို့က အရေးကြီးပါသည်။
စုနိုင်ပြီးမှ သဲထဲရေသွန် လွှင့်ပစ်ခံလိုက်ရရင်…
…. ပိုလို့ ပိုလို့ ရင်နာစရာ ကောင်းလှပါသည်။
ဟုတ်တယ်…တတ်နိုင်သလောက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို စောင့်ရှောက်ကြမယ်…
မီးမရှို့နဲ့… စက္ကူတွေကို မလိုရင်မသုံးနဲ့…
အရေးအကြီးဆုံး အလုပ်…. သစ်ပင်လေးတွေစိုက်ကြမယ်…
ကျွန်တော်က Organic သီးနှံ အဖြစ်ဆုံး အပင်ကို သိပ်ကြိုက်တာ..
မန်ကျည်းပင်… သက်တမ်းရှည်တယ်.. ဆေးဖျန်းစရာမလိုဘူး..
ကျုပ်တို့ဘိုးဘွားတွေစိုက်ခဲ့လို့သာ မန်ကျည်းသီး ကောင်းကောင်းစားနေရတာ..
တတ်နိုင်သလောက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို စောင့်ရှောက်ကြမယ်…
kai ပြောတာလည်း မှန်တယ်…
ရာသီဥတုဖောက်ပြန်လာရင်.. သီးနှံတွေပျက်စီးမယ်.. ဈေးတက်မယ်…စိုက်ထားတဲ့သီးနှံတွေ ရာသီဥတုကြောင့်ပျက်ရင်… အရှုံးပေါ်မယ်….အကြွေးတင်မယ်…
သီးနှံရှားပါးပြီး… တောင်သူတွေ ဝင်ငွေမရှိရင်… တောင်သူဦးရေများတဲ့ ဒီနိုင်ငံမှာ ဈေးကွက်ပျက်မယ်..
ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုတွေ ဖြစ်လာရင်…. လုကြမယ်… သတ်ကြမယ်..
ပြီးတော့ အနာရောဂါတွေ ပေါလာမယ်… ဒါတွေအတွက်ကော ဘာလုပ်ကြမလဲ…
kai ပြောသလိုပါပဲ .. ကျုပ်တို့နိုင်ငံမှာ… သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး..
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို သတိပြုရင်း… အခြားပြဿနာတွေကိုလည်း… ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားရမှာပါ…
ဘာကြောင့်ဆို… အစိုးရရဲ့ တရားဝင် သစ်ထုတ်လုပ်ခွင့်ရထားသူများက တစ်ရက်ကို သစ်တန်ပေါင်း ၃၀ဝ ကျော်ကို ခုတ်လှဲထုတ်ယူနေတာပါ… ဒါ… တစ်နေရာထဲမှာနော်..ဒါတွေကို ဘယ်လိုရပ်တန့်မလဲ… အဲဒီ တန် ၃၀ဝ အတွက် လှဲလိုက်ရတဲ့ သစ်ပင်အသေးတွေ အများကြီးရှိတယ်…
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ… နှမ်းတစ်စေ့ချင်း စုပေါင်းကြရအောင်ပါ… ဘယ်လိုစုပေါင်းကြမလဲ…ဘယ်လိုဆီဖြစ်အောင်လုပ်ကြမလဲ….
မန်ကျည်းပင်သည် အရွက်နုကို သုတ်စား အသီးကို ဟင်းထဲ ထည့်ချင် အသားကို စင်းနှီးတုံး အစအန ကို အမှုန့်ကြိတ်ပြီး အမွေးတိုင် လုပ်တယ်။
အပင်ကို ဒီတိုင်း အသီးခူးရောင်းရင် သိပ်မရဘူး အပင်လှဲပြီး ရောင်းရင် ပိုရတယ်။ လတ်တလော ပဲမြင်ကြတယ် နောင်ရေးဆိုတာ မမြင်ကြတော့ ကုန်တာပါပဲ။
သူကြီးရဲ့ မေးခွန်းတွေက လွှတ်တော်မှာ ချပြပြီး မေးဖို့ကောင်းတယ်။ လက်ရှိ ပညာရေးစနစ်ကို အဖွဲ့တဖွဲ့ ဖွဲ့ပြီး review လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ အဆိုကို ပယ်ချသွားတဲ့ လွှတ်တော်..ဆိုတော့လည်း သူကြီးရဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဘယ်လိုဖြေမလဲ၊ ဘယ်လိုပယ်မလဲ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။
မုန်တိုင်းဝင်လာခဲ့သော်..သဘာဝဘေးကျခဲ့သော်… မိုးလေဒဏ်ခံနိုင်တဲ့.. ခေတ္တနားခိုဖို့ရာ cyclone shutter တွေ ဆောက်ပေးထားပါတယ်လို့…. TV ထဲမှာ ကြည့်ဖူးတယ်။
နောင်ခါလာနောင်ခါဈေး မီးစင်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေက ကျနော်မှာတောင်စွဲကပ်နေသလိုပါဘဲ။
ဘာလို့လဲဆိုတော ကြိုတင်လုပ်ဆောင်ဘို့ဆိုတာထက် လတ်တလောပြေလည်ဘို့ကိုဘဲဦးစားပေးခဲကြတာ
မိုးလည်း မကြာခဏရွာနေတာဆိုတော့ သစ်ပင်စိုက်လို့လွယ်နေပါတယ်၊ ကိုယ့်ခြံဝင်း ကိုယ့်အိမ်ရှေ့ အိမ်ဘေးတွေကစလို့ နိုင်သလောက် အရိပ်ရပင်တွေ စိုက်ကြပါစို့ ၊နာဂစ်ပြီးကာစမှာ Total school က ့သူ့ကျာင်းသားတွေရဲ့ ကားတွေမှာ Grow More Tree ,Keep Yangon Green Sticker ကပ်ပေးတာတွေ့ရပါတယ်၊
သူများသစ်ပင်ခုတ်တာ ကိုယ်မှတားမရတော့ အပြစ်ပြောနေမယ့်အစား ကိုယ်နိုင်တဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးလုပ်ကြပါစို့။
2000 group က ဖွင့်တဲ့ ယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်တန်းတွေမှာ Say No to Plastic အမြဲထည့်ပြောပါတယ်၊
မသုံးဖို့ထက် Reuse,recycle က ပိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်၊
ထိုင်းက ကျောင်းသားလေးတွေ recycle ပစ္စည်းတွေသုံးဖို့ စီတန်းလှည့်လည်ပြီး ဆန္ဒပြပွဲလုပ်တဲ့ သတင်းတွေ့ဖူးပါတယ်၊
ကျွန်မက စာရေးရင် internal case တွေမှာ တစ်ဖက်လွတ် စက္ကူတွေ သုံးလေ့ရှိပါတယ်၊
ဒါကို တချို့က ကပ်စေးနည်းတယ်ဝေဖန်ကြပါတယ်၊
ကျွန်မကတော့ ဒါ အရှင်အာနန္ဒာရဲ့နည်း၊ လယ်တီဆရာတော်ကြီးရဲ့နည်းပါလို့ ရှင်းပြပါတယ်၊
လယ်တီဆရာတော်ကြီးရဲ့ သုံးလူ့ရှင်ပင် ကဗျာ ဟာ ၃၂ တိုင် ဖယောင်းတိုင်ထုပ်တဲ့ စက္ကူလေးတွေဖြန့်ပြီးရေးထားတာဆိုတဲ့ အကြောင်း မကြွယ်ကြွယ်ရဲ့ ဆောင်းပါး သတင်းစာထဲမှာ ဖတ်ဖူးပါတယ်၊
စဉ်းစားလို့ ဉာဏ်မီသရွေ့လေး မန်းကြည့်တာပါ၊
ဘယ်သူမပြုမိမိမှုပါပဲ၊ ရေများရေနိုင် မီးများမီးနိုင်ပါဘဲ၊ လောဘနဲ့မသိနားမလည်မှုပေါင်းလိုက်ရင် ထိမ်းချုပ်ဖို့မလွယ်ပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကြိုးစားကြည့်တာတော့မမှားပါဘူး။